परदेशमा २२ सय ३८ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित, ४८ को मृ’त्यु ,कुन देशमा कती? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/परदेशमा २२ सय ३८ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित, ४८ को मृ’त्यु ,कुन देशमा कती?
परदेशमा २२ सय ३८ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित, ४८ को मृ’त्यु ,कुन देशमा कती?
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना नि’यन्त्रणमै छ, तर विदेशमा रहेका नेपालीमा सं’क्रमण देखिने र मृ’त्यु हुने क्रम बढ्दो छ । शनिबारसम्ममा विभिन्न २२ देशमा रहेका २ हजार २ सय ३८ नेपाली कोरोनाबाट सं’क्रमित भएका छन् भने ४८ नेपालीको मृ’त्यु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै अमेरिका र बेलायतमा बस्ने नेपाली सं’ क्रमित भएका छन् ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार बेलायतमा मात्रै ३३ नेपालीको कोरोना सं’क्र’मणबाट मृ’त्यु भएको छ । त्यस्तै, अमेरिकामा १०, युएईमा दुई तथा आयरल्यान्ड, जापान र टर्कीमा एक/एकजनाको मृ’त्यु भएको छ । अमेरिका र बेलायतमा रहेका एक÷एक हजार नेपालीमा सं”क्रमण देखिएको छ । त्यस्तै, युएईमा ७१, बहराइनमा ४९, पोर्चुगल र आयरल्यान्डमा २२/२२, कुवेतमा २१, अस्ट्रेलियामा ११, स्पेनमा १०, स्विजरल्यान्डमा ५, साउदी अरब, जर्मनी र बेल्जियममा ४/४, मलेसिया र क्यानाडामा ३/३, माल्टा, जापान र हङकङमा २/२, टर्की, म्यानमार र फ्रान्समा १/१ जनामा सं’क्र’मण देखिएको एनआरएनएले जनाएको छ ।
यो तथ्यांकभन्दा पनि धेरै नेपालीमा सं’क्रमण भएको अनुमान अध्यक्ष पन्तको छ । ‘विशेषगरी खाडी मुलुकमा धेरै नेपालीमा सं’क्र”मण भएको हुन सक्छ, कतिले लुकाएको समेत अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने । खाडी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदार समस्यामा रहेको एनआरएनएले जनाएको छ । विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीले स्वदेश फर्किने इच्छा देखाएको एनआरएनएले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको थियो । २४सै घन्टा सेवा दिने गरी दुई साताअगाडि एनआरएनएले सुरु हेल्पलाइनमा फोन गर्नेमध्येका ७७ प्रतिशतले मा’तृभूमि फर्किन चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन् । रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । हो, नेपालमा कोरोना नि’यन्त्रित छ, तर विदेशमा रहेका नेपालीमा सं’क्रमण फै’लिएको छ, मृ’त’कको संख्या पनि बढिरहेको छ
अमेरिका : कोरोनाको दोस्रो इपि’सेन्टरमा नेपालीको बसोवास
१० को मृ’त्यु, एक हजारभन्दा धेरै सं’क्र’मित
अमेरिकामा सक्रिय पत्रकार किशोर पन्थीका अनुसार कोरोनाको सं’क्रमणबाट अमेरिकामा १० नेपालीको मृ’त्यु भएको छ । न्युयोर्कमा मात्रै एक हजारभन्दा धेरै नेपाली कोरोनाबाट सं’क्र’मित भएका छन् । उपचारपछि उनीहरू क्र’मशः घर फर्कने क्रम भने जारी छ ।
तीनप्रकारका नेपाली धेरै प्र’भावित
कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा मुख्यतः तीन प्रकारका नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै प्र’भावित भएका छन् । पहिलो, विद्यार्थी भिसामा रहेका नेपालीहरू । सरकारले दिने कुनै पनि राहत प्राप्त नगर्ने तथा निश्चित समयभन्दा धेरै काम समेत गर्न नपाउने भएका कारण ठुलो संख्यामा उनीहरू मा’रमा परेका छन् । चर्को आर्थिक अभावको सामना पनि गर्नुपरेको छ ।
दोश्रो, अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन नेपालीहरू च’र्को मा’रमा परेका छन् । उनीहरू पनि सरकारबाट पाउने आर्थिक सुविधाबाट वञ्चित छन् । सन् २०१५ भन्दा अगाडि अमेरिका आएका कागजपत्रविहिन नेपालीलाई टीपीएसले समेटेको छ तर त्यसपछि कागजपत्रविहिन हुनेहरू आर्थिक मा’रमा छन् । कागजपत्रविहिनहरूका लागि केही गैर नाफामुलक संस्था र न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया जस्ता उदार राज्यमा स्थानीय सरकारले प्याकेजहरू ल्याएपनि त्यती प्रभावकारी छैनन् ।
तेश्रो, विभिन्न भिसामा आएका तर, कोरोनाका कारण फर्कन नसकेका नेपालीहरू स’मस्यामा परेका छन् । उनीहरूले एकातिर आर्थिक अभाव झेल्नुपरेको छ भने अर्कातर्फ भिसा थपका लागि सरकारले खास व्यवस्था गरेको छैन । उनीहरूले चार सय ५५ डलर तिरेर नियमित प्रकृयाबाटै भिसा थप्नुपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । (यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा दैनिकले छापेको छ )
सुहागरातको पहिलो दिन जब श्रीमतीको घुम्टो खोले श्रीमानले त्यसपछि गयो सात्तो
विश्वकै ठूलो नितम्ब भएकी मोडल, धेरै कुर्सी-बेड भाँचिएको खुलासा (भिडियो)
यसवर्ष भक्तपुरको जात्रा औपचारिकता मात्रै सीमित गर्ने
प्रम ओली भ्रष्टचार प्रकरणको छानविन गर्न कसले रोकेको ? कुरो होइन काम गरेर देखाउनुहोस् :डा. भट्टराई